BlowToUnlock, अनलक गर्न उड्नुहोस् आईफोन समाचार
BlowToUnlock (Cydia) लाई धन्यवाद उडाएर तपाईंको आईफोन अनलक गर्नुहोस्
यो हाम्रो लागि झन् झन् स्पष्ट हुँदै गइरहेको छ कि मोबाइल उपकरणहरूको प्रतिभा केवल उनीहरूका विशेषताहरू, सुविधाहरू वा हार्डवेयर मात्र होइन, तर नवीनताको ठूलो अंश सबै विकासकर्ताहरूमा पर्दछ जुन प्रयोगकर्ताको लागि नवीन अनुप्रयोगहरू वा उपयोगिताहरू प्रदान गर्ने काम गर्दछन्। केही दिन अघि हामीले यसका साथ उदाहरण देख्यौं नयाँ विज्ञापन आईफोन S एस को हो जुन एप्पलले 'ड्रीम्स' शीर्षक अन्तर्गत शुरू गर्‍यो। को दृश्य को लागी धन्यवाद जेल प्रयोगकर्ताहरू अब गर्न सक्छन् उडाएर आफ्नो उपकरण अनलक गर्नुहोस्, टर्मिनलमा कुनै बटन छुने आवश्यकता बिना। यस ट्वीकको नाम हो ब्लोटो अनलक र द्वारा सिर्जना गरिएको हो iakd.
मात्र संग माइकमा हावा, आईफोन मोडेलको तल अवस्थित, जडान पोर्टको छेउमा, BlowToUnlock स्वचालित रूपमा उपकरण अनलक हुनेछ। अवश्य पनि, एक ब्लकिocking कोड भएको मामलामा, केहि सिफारिस पूर्ण, हामी हामीलाई कोड प्रविष्ट गर्न सोध्नेछ उडा पछि। ट्वीकको साथ केवल समस्या यही हो कि कुनै पनि परिवेशको आवाज वा लाउड संगीत संग स्थान उपकरण अनलक गर्न सक्दछ, तर एक पटक स्थापित, भित्र सेटिंग्स ब्लोटो अनलक कन्फिगरेसन फेला पर्‍यो र त्यहाँबाट हामी गर्न सक्दछौं संवेदनशीलता बढाउनुहोस् माइक्रोफोन शोर गर्न। पूर्वनिर्धारित संवेदनशीलता बढाउन यो सिफारिस गरिएको छ कि आईफोन आफै अनलक छैन। यो कन्फिगर पनि गर्न सकिन्छ ताकि उड्ने स्क्रिन खोल्नुहोस् तर उपकरण अनलक छैन।
BlowToUnlock हामीलाई धेरै लाग्यो जिज्ञासु र यसलाई चिन्न योग्यको हाम्रो पाठकहरूलाई। बाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ Cydia को भण्डारमा ठुलो हाकीम, पूर्ण छ free र आईओएस with को साथ आईफोन, आईप्याड र आईपड टचको समर्थन गर्दछ, भर्खरको आईओएस .7.१.२ सम्म।
के तपाईंले ब्लोटलो अनलक डाउनलोड गर्नुभयो? तपाईलाई यो ट्वीक के लाग्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » जेल » Cydia » BlowToUnlock (Cydia) लाई धन्यवाद उडाएर तपाईंको आईफोन अनलक गर्नुहोस्
WOOFit, तपाईंको संगीतको लागि सब भन्दा शक्तिशाली पोर्टेबल स्पिकर